သက်ဝေ: Love each other...
New days & new ways passed by…
But Love just keeps on growing...
Cause I bring out the best in YOU and you the best in ME…
It takes two of us to make the perfect "WE"...
Love each other, more than ever.
Posted by သက်ဝေ at 12:00 AM
Labels: ကဗျာ, အမှတ်တရစာ
pandora November 12, 2009 at 12:35 AM
အသက်ထက်ဆုံး ကြင်ကြင်နာနာ ဆိုးတူကောင်းဖက် ရွှေလက်တွဲလို့ မခွဲမခွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Moe Cho Thinn November 12, 2009 at 2:03 AM
နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ တဘ၀ဆိုတဲ့ ဘ၀ခရီးကို အတူတွဲပြီး မြဲမြဲခိုင်ခိုင် ချစ်ကြင်နာလျက် လှမ်းလျှောက် ပျော်ရွှင်နိုင်စေ..
း) (အေးကွယ်..အခုလို ချစ်ချစ်ခင်ခင်မြင်ရတာ ၀မ်းသာတယ်)
မီယာ November 12, 2009 at 6:47 AM
မွန်ကတော့ လုပ်ပြီ :) မသက်ဝေကို ဘယ်လူကြီးကများ ဆုပေးနေသလဲလို့... နားလည် သလောက် ဖတ်ပြီး ကြည်နူးသွားတယ် မသက်ဝေ
အပြုံးပန်း November 12, 2009 at 7:37 AM
စုချစ် November 12, 2009 at 8:40 AM
အစ်မသက်ဝေ... မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နဲ့တူတယ်နော်...
အစ်မနဲ့ အစ်ကိုကြီးတို့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည် အေးအတူ ပူအမျှ သက်ဆုံးတိုင် ချစ်ခင် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ တောင်းဆုချွေလျက် ...
sonata-cantata November 12, 2009 at 10:35 AM
တန်ခူး November 12, 2009 at 10:49 AM
he is the best in u…
u r the best in him…
အချစ်တွေ ပျော်ဝင်စီးမျောနေလို့ထင်ရဲ့… ကဗျာလေးက ချိုလိုက်တာ သက်ဝေရယ်…
ဘ၀လေးတွေကလဲ ချိုချိုဆိုတော့ သူသာ အနားရှိရင် ဘာလိုဦးမှာလဲနော်…
ယနေ့ မှစ အနှစ်တရာတိုင် သက်ဝေကိုချစ်သောကိုကြီးနဲ့ကိုကြီးကချစ်သောသက်ဝေတို့ဒီထက်မှမက အချစ်တွေတိုးလို့မရိုးတမ်းချစ်နိုင်ကြပါစေ… Happy Anniversary!
ပုံရိပ် November 12, 2009 at 11:58 AM
ဒီလင်ဒီမယား အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေ။
tg.nwai November 12, 2009 at 12:00 PM
အချစ်မှသည် မေတ္တာနှောင်ကြိုး ဂရုဏာထပ်ဆင့် အကြင်နာသံယောဇဉ် ရစ်ပတ်နွယ်လျှက် သံသရာဆုံးတိုင် အတူတူ လှမ်းလျှောက်နိုင်ပါစေ သက်ဝေရေ...
Anonymous November 12, 2009 at 7:13 PM
အေးကွယ်...ချစ်သောကိုကြီးနဲ့ကိုကြီးကချစ်သောသက်ဝေတို အိုအောင်မင်းအောင်ပျော်စရာကြီးပါလားဝေ့
ကဗျာလေးက ချိုလိုက်တာ သက်ဝေရယ်…
ချစ်ကြည်အေး November 12, 2009 at 7:48 PM
ငါတို့လဲ ဘာမှ မစားရပါလား....:( ချစ်သော သူငယ်ချင်း...ပျော်ရွှင်ပါစေ
rose of sharon November 12, 2009 at 10:16 PM
အိုး... ကြွေလောက်တယ်း)
nu-san November 12, 2009 at 10:33 PM
မမရေ.. Happy Anniversary!!
"Love each other, more than ever" တဲ့လား အမ.. စာသားလေးကို သဘောကျတယ်.. :)
T T Sweet November 12, 2009 at 10:53 PM
ပျော်ရွှင်သော မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါစေ။ ကိုကြီးနဲ့ မသက်ဝေတို့ ဘ၀ခရီးကို သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် လျောက်လှမ်းနိူင်ကြစေသော်။
Hmoo November 13, 2009 at 12:54 AM
wai November 13, 2009 at 1:14 PM
့happy anniversary နော်။ ရောက်တာနောက်ကျလို့ ခွင့်လွတ်နော်။
mae November 13, 2009 at 1:42 PM
Welcome November 13, 2009 at 8:50 PM
khin oo may November 14, 2009 at 8:44 PM
ကျန်းမာချမ်းသာ ခိုင်မြဲတူမြဲ နိုင်ပါစေ။
ခင်မင်းဇော် November 16, 2009 at 10:41 AM
ပျော်ရွှင်ဘွယ်ဘ၀ခရီးကို ဆက်ကာဆက်ကာ လှမ်းလျှောက်နိုင်ပါစေ ညီမသက်ဝေရေ..
သက်ဝေ November 17, 2009 at 10:35 AM
တောင်းပေးတဲ့ ဆုတွေအားလုံးနဲ့ ပြည့်စုံပါရစေ...
မေတ္တာဖြင့် ဆုတောင်းပေးသွားကြသူများ အားလုံးကို ရင်ထဲမှ အစဉ် လှိုက်လှဲချစ်ခင်စွာ ကျေးဇူးတင်နေပါမည်...။